राजविराजमा एक युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार, हारगुहार माग्दा प्रहरीले वास्तै गरेन, के हो रहस्य ? — Sanchar Kendra
राजविराजमा एक युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार, हारगुहार माग्दा प्रहरीले वास्तै गरेन, के हो रहस्य ?
रक्षाबन्धनको अवसरमा लागेको मेला गएकी एक युवती ६ जनाबाट बलात्कृत भएकी छन् ।
घटनाक्रमअनुसार दाजुभाइलाई रक्षाबन्धन बाँधिदिएर सप्तरीकी २० वर्षीया युवती साथीसंगीसँग मेला हेर्न अर्नाहा गएकी थिइन् । आइतबार दिउँसो युवती साथी कमलेशको साइकल पछाडि बसेर घरतर्फ जाँदै थिइन् ।
कठौनानजिक पुगेपछि मादक पदार्थ सेवन गरेका ८–१० जनाले साइकल रोकेर युवतीलाई जिस्क्याउन थाले । ती युवतीका साथीभाइ भने अघि बढिसकेका थिए । कमलेशका साथीले प्रतिवाद गरेपछि उनलाई उक्त समूहले कुटपिट गरेर साइकल र मोबाइल खोसेको जनाइएको छ ।
उनका अनुसार होहल्ला भएपछि अभियुक्तका आफन्तले नै उनीहरुलाई उम्काए । साथै मध्य राती प्रहरीलाई हारगुहार गर्दा प्रहरीले वास्ता नगरेको आरोप लगाएका छन् । प्रहरीले वास्ता नगर्नुको पछाडि केहि रहस्य रहेको भन्दै पिडित पक्ष आक्रोशित भएका छन् ।
उनका अनुसार रातको अढाई बजे प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ लागे पनि अभियुक्तले स्थान परिवर्तन गरिसकेकाले युवती भेटिएनन् । सोमबार बिहान ५ बजे उज्यालो हुन लागेपछि बलात्कारीले छाडेको पीडितले बताइन् ।
खोजीका क्रममा प्रहरीले सोमबार बिहान दुई जना र दिउँसो थप दुई जना अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छ । एसपी राजेन्द्र विष्टले पक्राउ परेका दुई जना घटनामा प्रत्यक्ष र दुई जना कुटपिटमा संलग्न रहेको पाइएको जानकारी दिए ।